अध्याय ६० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जीवन वृद्धि हुनु सजिलो कुरा होइन; यसलाई एउटा प्रक्रिया चाहिन्छ, यसको साथै, तिमीहरूले मूल्य चुकाउन सक्नुपर्छ, र तिमीहरूले एउटै हृदयले मसित सहकार्य गर्नुपर्छ, र त्यसद्वारा तिमीहरूले मेरो प्रशंसा पाउँछौ। स्वर्ग र पृथ्वी र सबै थोक मैले उच्चारण गर्ने वचनहरूद्वारा स्थापित हुन्छन् अनि पूर्ण बनाइन्छन्, र ममा कुनै पनि कुरा सम्पन्न हुन सक्छ। तिमीहरू चाँडै बढेको, मेरो काँधहरूबाट बोझ लिएर, आफैमाथि राखेको, अनि मेरो खातिर मेरो परिश्रम गरेको म चाहन्छु; तब मात्रै म सन्तुष्ट हुनेछु। कुन छोराले आफ्नो पिताका बोझहरू बोक्न इन्कार गर्छ? कुन पिताले आफ्नो छोराको निम्ति दिन र रात परिश्रम गर्दैन? तथापि, तिमीहरूसित मेरो इच्छाको कुनै बुझाइ छैन, अनि मेरा बोझहरूलाई तिमीहरू बेवास्ता गर्छौ; मेरो वचनहरूले तिमीहरूलाई कुनै असर गर्दैन, अनि तिमीहरूले मैले भनेअनुसार गर्दैनौ। तिमीहरू सधैँ आफ्नै मालिकहरू हौ; कति स्वार्थी! तिमीहरू आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्दछौ!
तैँले साँच्चिकै मेरो इच्छालाई बुझ्छस् कि तैँले नबुझेको बहाना गर्दैछस्? किन तँ सधैँ त्यस्तो आवारा व्यवहारमा तल्लीन हुन्छस्? के त्यसो गरेर तैँले मेरो नजरमा ठीक काम गरिरहेको छस् भनेर तेरो विवेकले भन्छ र? तेरो रोगको कारण पत्ता लगाइसकेपछि पनि तँ किन उपचारको निम्ति मसित कुराकानी गर्दैनस्? म तँलाई बताउँछु: आजको दिनदेखि, तिमीहरूको शरीरमा कुनै रोगहरू हुनेछैन। यदि तिमीहरूको शरीरको कुनै भाग अस्वास्थ्य भएमा, बाहिरी कारण खोजी गर्नमा व्यस्त नहोऊ; बरु मेरो सामु आऊ र मेरो अभिप्राय जान्ने प्रयास गर। के तिमीहरूले यसलाई सम्झिनेछौ? यो मेरो प्रतिज्ञा हो: आजको दिनदेखि, तिमीहरू पूर्ण रूपले आफ्नो भौतिक शरीरदेखि निस्केर आत्मिक संसारभित्र प्रवेश गर्नेछौ; अर्थात्, अब उपरान्त तिमीहरूको शरीर रोगले बोझिलो हुनेछैन। के तिमीहरू त्यसमा खुशी छौ? के तिमीहरू आनन्दित अनुभूति गर्छौ? यो मेरो प्रतिज्ञा हो। यसको अतिरिक्त, यो तिमीहरूले लामो समयदेखि आशा गरेको कुरा हो। आज, तिमीहरू आशिषित जनहरूमा यो पूरा भएको छ। कति उदेकको र अथाह कुरा!
मेरो काम दिन र रात; पल-पल अघि बढ्छ। यो कहिल्यै रोकिँदैन। किनकि मेरो अत्यावश्यक चाहना भनेको तँलाई मेरो हृदयअनुसारको मानिस बनाउनु हो, ताकि मेरो हृदयले तिमीहरूद्वारा चाँडै नै सान्त्वना पाउन सकेको होस्। मेरो छोराहरू! तिमीहरू मेरो भलाइको आशिषहरूमा सहभागी हुने समय आएको छ! विगतमा, तिमीहरूले मेरो नामको निम्ति कष्ट भोग्यौ, तर अहिले तिमीहरूको परीक्षाका दिनहरू सिद्धिएको छ। कसैले मेरा छोराहरूको शिरमाथि भएको रौँलाई हानि पुर्याउने साहस गरेमा म तिनीहरूलाई सहजै क्षमा गर्नेछैनँ, न त तिनीहरू कहिल्यै फेरि उठ्न सक्नेछन्। यो मेरो प्रशासनिक आदेश हो, र जसले यसलाई भङ्ग गर्छ, तिनीहरूले आफ्नै खतराको लागि त्यसो गर्दछ। मेरा छोराहरू! तेरो हृदय सन्तुष्ट हुने गरी आनन्द मनाऊ! गाऊ र आनन्दसहित पुकारा गर! तिमीहरू उपरान्त त्रासित र उत्पीडित हुनेछैनौ, अनि तिमीहरू उपरान्त सतावटमा पर्नेछैनौ। ममाथिको विश्‍वासको कारण तिमीहरू उपरान्त भयभीत हुनेछैनौ; तिमीहरूले आफ्नो विश्‍वासलाई सार्वजनिक रूपले घोषणा गर्नुपर्छ। ब्रह्माण्ड र पृथ्वीका कुनाकाप्चाहरू थर्कने गरी मेरो पवित्र नाउँलाई ठूलो सोरमा पुकारा गर। तिनीहरूले तिरस्कार गर्ने, तिनीहरूले विध्वंस र यातना गर्ने गरेकाहरू, आज तिनीहरूभन्दा माथि खडा छन् र तिनीहरूलाई प्रभुत्व गर्छन्, शासन गर्छन्, र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूलाई न्याय गर्छन् भन्‍ने कुरा तिनीहरूले देखून्।
तिमीहरू केवल प्रवेशमा चासो राख, अनि म तिमीहरूलाई अझ उत्तम आशिषहरू दिनेछु, जुन आशिषले तिमीहरूको आनन्दको निम्ति पर्खिरहेका छन्, र तिमीहरूले अतुलनीय मिठास, असीम रहस्यहरू, अनि अगाध गहिराइको उत्तम स्वाद लिन सक्नेछौ।
अघिल्लो: अध्याय ५९
अर्को: अध्याय ६१